प्रदेश २ मा वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेले पाँच दिनभित्रै ऋण पाउने | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति १६ माघ २०७६, बिहीबार १६:३५ लेखक नेपाली जनता
जनकपुरधाम । तपाईंको घर प्रदेश २ मा छ ? र, वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनुभएको छ ? तर रकमको अभावमा जान सकिरहनुभएको छैन भने अब त्यो चिन्ता हटाउँदा हुन्छ । विदेश जाने युवाका लागि प्रदेश सरकारले बिना धितो ऋण दिने व्यवस्था मिलाएको छ ।
प्रदेश सरकारले यस्तो व्यवस्था मिलाएसँगै विदेश जानकै निम्ति चर्को व्याजमा ऋण लिने युवाहरुको बाध्यता हट्ने भएको छ । प्रदेश सरकारको समन्वयमा दुई वटा बैंकले बिना धितो सहुलियत ऋण दिने भएको हो । जस अन्तर्गत बिहीबार नौ जना युवाले वैदेशिक रोजगार ऋण पाएका पनि छन् ।
प्रदेश सरकार, सीप परियोजना र प्रभु बैंकबीच वैदेशिक रोजगारमा जानेहरुलाई सहुलियत दरमा विना धितो ऋण उपलब्ध गराउन भएको सम्झौता अनुसार प्रभु बैंकले बिहीबारबाट युवालाई ऋण दिन सुरु गरेको हो ।
जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रमबीच मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले प्रभु बैंकको वैदेशिक रोजगार कर्जाको शुभारम्भ गरे ।
त्यस अवसरमा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले यो योजनाले साहुबाट ऋण लिएर वैदेशिक रोजगारीमा जानुपर्ने युवाहरुको बाध्यतालाई केही हद्सम्म समाधान गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
प्रदेशका ५ जिल्लामा प्रभु बैंकले र तीन जिल्लामा एसबिआई बैंकले यो ऋण उपलब्ध गराउनेछ । एसबीआई बैंकले बुधबारदेखि ऋण प्रवाह गर्न सुरु गरेको छ ।
प्रदेश सरकार, सिप परियोजना र प्रभु बैक तथा एसबीआई बैंक बीच साउन महिनामा बैदेशिक रोजागरीमा जाने युवाहरुलाई सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराउने सम्झौता भएको थियो ।
प्रभु बैंकले यो सेवा सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा तथा सिराहा, धनुषा र महोत्तरीमा एसबीआई बैंकले ऋण प्रवाह गर्नेछ ।
भिसा लागेको पाँच दिनभित्रै पाइनेछ ऋण
वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने युवाको भिसाा लागेको पाँच दिनभित्रै ऋण पाउने भएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुले राहदानी बनाउने बितिकै बैंकमा नागरिकता, पासपोर्ट र ४ प्रति फोटो सहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । यसपछि बैंकले ती व्यक्तिको नाममा बचत खाता खोलिदिनेछन् ।
जब त्यो व्यक्तिको भिसा लाग्छ, त्यसपछि भिसासहित श्रम सम्झौता बैकमा जम्मा गर्नुपर्ने हुन्छ । यो पेश गरेको पाँच दिनभित्रै कर्जा उपलब्ध गराउने दुबै बैंकले प्रदेश सरकारसँग सहमति गरेका छन् ।
डेढ करोडले चलाउँछन् मोबाइल इन्टरनेट
काठमाडौं । कुल जनसंख्यामध्ये आधाले मोबाइलबाट इन्टरनेट चलाउने गरेको छन्। त्यो पनि ब्रोडब्यान्ड। यसै वर्षको वैशाखसम्मको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको…
रक्सी खाएर यौनसम्पर्क गर्दा के हुन्छ ?
काठमाडाैं । रक्सी खाएर यौन सम्पर्क गर्दा बढी आनन्द आउछ भन्ने एक किसिमको भ्रम छ हाम्रो समाजमा । तर…
नारायणगढ–मुग्लिन सडक भाँसिदा सवारी आवागमनमा ठूलो समस्या
काठमाडौं । नारायणगढ–मुग्लिन सडक खण्डको गाईघाट नजिक अकस्मात सडक भाँसिएपछि आवागमन एकतर्फी भएको छ ।
सडक भाँसिने क्रम बढ्दै गएपछि…
दशैं लगत्तै काठमाडौंमा विद्युतीय बस
काठमाडौं । दशैं लगत्तै काठमाडौं उपत्यकामा विद्युतीय (इलेक्ट्रिक) बस सञ्चालनमा आउने भएका छन् । चीनबाट ल्याउन लागिएको बसको खरिद…
उपराष्ट्रपतिको कार्यालय लैनचौरमा
काठमाठौं । उपराष्ट्रपतिको कार्यालय एक महिना पछि बहादुरभवन कान्तिपथबाट लैनचौरस्थित नयाँभवनमा सर्ने भएको छ ।
सरकारले गत वर्ष जेठमा…